Pimex: Tantano ary ampio ny volanao amin'ny marketing | Martech Zone
Pimex: Tantano ary alao vola ny varotrao
Alatsinainy, Septambra 19, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Tsy manana ekipa fampivoarana orinasa mavitrika ao amin'ny maso ivoho izahay, ka fantatray fa very ny làlan'ny fitarihana ary tsy manararaotra ireo fotoana mety lavorary izahay. Hubspot mitatitra izany 79% ny mpitarika marketing dia tsy niova mihitsy amidy. Fanampin'izany:
25% amin'ireo mpivarotra izay mandray ny fizotran'ny fitantanana fitarihana matotra dia mitatitra fa ny ekipa mpivarotra dia mifandraika amin'ny fanantenana ao anatin'ny iray andro.
Pimex dia nanomboka tamin'ny beta, mamela ny mpampiasa hamorona valiny mandeha ho azy izay manome fahafaham-po ny filàna vaovao avy hatrany amin'ny mpanjifa ho avy. Tahaka ny fananana ekipa Sales 24/7, manome antoka fa ny mpanjifa tara amin'ny Internet dia hahazo valiny avy hatrany amin'ny fanontaniany.
Ny sehatra dia mamela ny mpivarotra sy ny ekipa mpivarotra:
Alamino ny fitarihana biolojika sy ny fandoavany
antsipirihany Analytics mikasika ny vinavina
Omeo fanavaozana amin'ny fotoana tena izy ny satan'ny fitarihanao
Ataovy mandeha ho azy ny valiny amin'ireo fitarihana vao tonga
The Pimex Ny sehatra dia ahafahan'ny mpivarotra sy ny ekipa mpivarotra mahazo fampahalalana tena izy izay tsy omen'ny mahazatra Analytics fitaovana. Pimex dia tsy mpifaninana amin'ny lozisialy CRM fa kosa fiderana azy ho an'ny orinasa madinidinika.
Maimaimpoana ny Pimex hitsapana, ary miasa amin'ny fitaovana rehetra izay misy ifandraisany amin'ny Internet, ary satria mahavita tena ny sehatra ary tsy mila sehatra hafa, dia mampiavaka ny mpifaninana aminy izany.
Tags: Auto-valintenyfitantanana fitarihanavaliny mitarikamitarika mitarikapimex
Ny marika manokana amin'ny tambajotra sosialy no marketing tsy mendrika indrindra
Adobe Spark: sary an-tserasera, tantara an-tranonkala ary horonan-tsary mihetsika